Waxa ka baxsan quruxdeeda iyo caanka, Séréna Williams sidoo kale waa mid u hibeeya khayaali, xitaa xanaaq. Serena Williams, oo jilicsan, ayaa ka labalabeysa inay wadada dhex gasho iyada oo gashan dharka hoosta, cagajug iyo qaawan, gacmaha iyo naasaha gacmaha.
Tani miyaanay jidkiisu ahayn inuu ku caabudo Maryantii Barakaysan ee Quduuska ahayd markay nadiifsanaatay? Mise waxay si fudud u xanaaqaysaa indhaha kuwa cibaadada leh ?? Si kastaba ha noqotee, Serena Williams wali waa isku mid. Quruxda, mala-awaalka iyo laxiga qalbi jabka leh iyada iyada la.
Inta u dhaxaysa ciise masiixi iyo awoowayaasheen Black / Afrikaanka, yaa xaq u leh aasaaska xasuusteenna? Gacaliyeyaal madow / Afrikaanka, waa laguu sheegay:
Sep30 05: 25